Izincwadi zomlando ezisuselwa kumaqiniso omlando: yazi ezinye zazo | Izincwadi Zamanje
Lapho sifunda incwadi, siyazi ukuthi singathola inqwaba yezinhlobo zemibhalo. Abanye baziwa kangcono kunabanye. Isibonelo, izinganekwane ziveza okungafani nokuthengiswa kwezincwadi. Kepha phakathi kwazo zonke izinhlobo, kukhona eyodwa evelele kakhulu: the izincwadi zomlando ezisuselwa ezenzakalweni zangempela.
Yize ababhali abaningi bezivumela "amalayisense" athile okuthi le ndaba isebenze kahle futhi konke kuhambisane, iqiniso ukuthi izincwadi zomlando, ezisuselwa emaqinisweni omlando, maningi. Impela abanye benu bayazi ngakho.
1 Izincwadi zomlando zangempela: umlando omsulwa
1.1 Izincwadi Zomlando: Umlando Wamadolobha Amabili
1.2 Impi nokuthula
1.3 Izincwadi zomlando: Inkantolo kaCarlos IV
1.4 Uhambo oluya ngasekupheleni kobusuku
1.5 Izincwadi Zomlando: Umugqa Womlilo
1.6 Ngiyavuma iminyaka engama-45 yokuhlola
1.7 Izincwadi Zomlando: Isibonakaliso Somthengisi
1.8 Isitimela Sezintandane
1.9 Izincwadi zomlando: Mina, uClaudio
1.10 Obani Abakhokhelwa Yinsimbi
1.11 Izincwadi zomlando: Igama le-rose
Izincwadi zomlando zangempela: umlando omsulwa
Izincwadi zomlando zangempela azidinisi, kholwa noma cha. Eqinisweni, emakolishi nasezikhungweni bavame ukuthumela lezo zincwadi. Kepha kukhona nabanye abatshelwa ngendlela yenoveli eyizincwadi zomlando kepha ezisuselwa kwizigameko zangempela.
Lapha sikushiya eyodwa ukukhethwa kwezincwadi ezisuselwa emaqinisweni omlando.
Izincwadi Zomlando: Umlando Wamadolobha Amabili
Umlando wamadolobha amabili ...
Le ncwadi ingenye yalezo ezilandisa ngezehlakalo zomlando zangempela. Kuyo, unga hlangana nendodakazi kadokotela, eboshwe iminyaka eyi-18 eBastille. Ngaphezu kwalokho, umongo, ulandisa ngokwenzeka ngesikhathi seFrance Revolution, kanye nezimo zaseLondon naseParis zimelwe kahle futhi, yize kunamalayisense athile avela kumbhali, iqiniso ukuthi unamathele emlandweni wangempela.
Futhi ngubani umbhali? Yebo, kholwa noma cha, uCharles Dickens lo.
Impi nokuthula (icala ne ...
Enye yezincwadi zomlando ezisuselwa ezenzakalweni zomlando zangempela yile, Impi Nokuthula, icebo elisibeka emlandweni ngenkathi uNapoleon ezama ukuhlasela iRussia.
Kodwa-ke, umbhali, uTolstoy, wayengafuni ukuxoxa nje ngamaqiniso, kepha wafaka indaba yothando lapho kubonakala khona isiko elikhona ngaleso sikhathi, nokuthi imindeni izivumelanisa kanjani nezimo ezintsha.
Izincwadi zomlando: Inkantolo kaCarlos IV
Inkantolo kaCharles IV: ...
Sigxile kakhulu kumlando waseSpain, ongaziwa namuhla ngabaningi, sinencwadi ebhalwe nguBenito Pérez Galdós elandisa ngesinye seziqephu ezimele kakhulu zobukhosi baseSpain. Sikhuluma ngakho indlela uFerdinand VI enza ngayo itulo lokuketula uyise esihlalweni sobukhosi.
Uma uthanda ukwazi umlando weSpain, khona-ke le ncwadi kufanele ibe ngaphansi kwebhande lakho.
Uhambo oluya ngasekupheleni kobusuku
Uhambo oluya ngasekupheleni kobusuku ...
Ibhalwe nguLouis-Ferdinand Céline, le ncwadi izokubeka eMpini Yezwe Yokuqala futhi, kumuntu wokuqala, ngomlingiswa kaFerdinand Bardamu, uzohlangana siphile kanjani leso sehlakalo esashintsha izimpilo zabaningi.
Kumele kuthiwe kuyashaqisa, nokuthi konke okwenzekile kubi kakhulu, kepha ekugcineni kosuku yilokho okwenzekile, ngakho-ke uzobe ubhekene nenye yezincwadi zomlando ezilandisa ngendaba evela emlandweni wangempela umhlaba.
Izincwadi Zomlando: Umugqa Womlilo
Umugqa womlilo ...
Le noveli ka-Arturo Pérez-Reverte isuselwa kwenye ye izimpi ezinzima kakhulu futhi ezimbi kakhulu ezenzeka empini yombango yaseSpain. Yebo, sibuyela emuva ukugxila eSpain ukuze sifunde ngesinye seziqephu esezike zenzeka ezweni.
Kulokhu, icebo ligxile kwamanye amasosha nakulokho okumele badlule kukho ngoba babhalisiwe ukulwa empini. Ngakho-ke, ukwethuka abakubonayo, ukuhlupheka kwabo, ukwesaba, ukwesaba kuzomelwa kule ncwadi, ngokuya ngamaqiniso angempela omlando.
Ngiyavuma iminyaka engama-45 yokuhlola
Ngiyavuma: iminyaka engu-45 ye ...
I-Wolf yayiseSpain inhloli ebaluleke kakhulu emlandweni wezwe. Futhi ukwazi ukuthi uphila kanjani engena ngaphakathi, ebeka impilo yakhe engcupheni nokuthi wahamba kanjani phakathi neminyaka engama-45 ayesebenza njengenhloli, ukusho okuncane kakhulu, yindaba engakholeki.
Kule ncwadi uzokwazi, hhayi isikhathi esingakanani somlando, kepha iqiniso elingokomlando elincike kumuntu othize, lapho ngezinkumbulo zakhe uzokutshela izimfihlo nezindaba ezizokwenza izinwele zakho zime.
Izincwadi Zomlando: Isibonakaliso Somthengisi
Uphawu lomkhapheli ...
Ibhalwe nguJuan Gómez-Jurado, lo mbhali ukwazile ukungena kwesinye sezenzakalo zomlando ezenzeka eSpain futhi abantu abaningi abangazi ngaso. Ukwenza lokhu, usibeka ngawo-40 lapho omunye umkhumbi ethola okunye ukuhlehla futhi banquma ukuwusiza. Lapho bahlangana neqembu lamaJalimane okuthi, ngokubonga, linikeze ukaputeni amatshe ayigugu nesibonakaliso segolide.
Futhi-ke indaba iqala ngomlingiswa wesilisa owayephila phakathi kweMpi Yezwe I neMpi Yesibili Yomhlaba, futhi ozama ukuthola ukuthi kwenzekani kubaba wakhe.
Isitimela Sezintandane ...
Phakathi kuka-1854 no-1929 kuseduze Izingane eziyizintandane ezingama-250000 zithathwe zisuka eNew York zayiswa e-US Midwest. Iqala kanjalo-ke indaba esekelwe ezenzakalweni ezingokoqobo zomlando kule ncwadi, ebhalwe nguChristina Baker Klein, othi, ngamazwi abesifazane ababili ababa maphakathi nendawo, alandise ngokwenzeka kulezi zingane ezanyamalala emhlabeni.
Kuyingxenye yomlando wase-United States okungaziwa kakhulu, futhi lokho kusikisela ukuthi ngaleso sikhathi ukuthengiswa kwezingane kwakuyinto ejwayelekile kakhulu, ngoba zazisetshenziswa njengomsebenzi onzima nokuthi amadoda ayengafuni ukukwenza .
Izincwadi zomlando: Mina, uClaudio
Mina, uClaudio (13/20)
Le ncwadi, esibuyisela emuva embusweni waseRoma, isuselwa kumlingiswa owaziwayo, Claudio, inzalo kaJulius Caesar kanye no-Augustus, Caligula noTiberius. UClaudio nguyena owabusa kusukela ku-41 kuya ku-54, lapho iRoma linqoba izindawo eziningi.
Kepha ongakwazi ukuthi uClaudio wayekhubazekile futhi enamalimi, ukuthi wayenokuhlukumezeka okuningi nokwesaba, ukuthi kunezinto eziningi kusuka ebuntwaneni bakhe ezamkhomba kanzima ebudaleni bakhe.
Ngakho-ke, incwadi ikunikeza ukulinganiselwa okungokoqobo ngangokunokwenzeka kulesi sibalo nokuthi babephila kanjani ngaleso sikhathi.
Futhi kususelwa ku- iziqephu zeMpi Yombango yaseSpain, umbhali, u-Ernest Hemingway, owayengumbhali wezempi eSpain, ulandisa isahluko saleyo mpi, ikakhulukazi leyo eyaziwa ngokuthi yiSegovia Offensive.
Ngaleso sikhathi, uhlangothi lweRiphabhulikhi lwaluzama ukuvimbela amavukelambuso ukuthi angadluli, kodwa-ke, kwakungelula njengokucabanga.
Izincwadi zomlando: Igama le-rose
Igama le-rose ...
Yebo, le noveli isuselwa ezenzakalweni zomlando. Ngokuqondile, kwakususelwa embhalweni wesandla wekhulu le-XNUMX okwaxoxwa ngawo, owatholakala e-Austria ukuthi ngabe kwenzeka kanjani uchungechunge lwamacala angaqondakali eMonk Monastery, enye yezidume kakhulu emhlabeni.
Ngakho-ke, umbhali wenoveli, u-Umberto Eco, udale indaba yakhe ngokususelwa kulokho okwenzeka kuleyo ndawo ngaleso sikhathi nokuthi kwenziwa kanjani uphenyo nokuthi kwembulwa yini icala lokubulala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Izincwadi zomlando ezisuselwa emaqinisweni omlando
UCristina Valencia Salazar kusho
Ngithole ukubuyekezwa kwencwadi ngayinye kungakholeki, ngena kule sayithi ngoba isihloko sidonse ukunaka kwami, kepha lapho ngifunda ukuthi lesi sigaba besisekelwe ezenzakalweni zangempela, kungenze ngafuna ukufunda okwengeziwe futhi indaba ngayinye ibibonakala ijabulisa kakhulu ngoba bengingakaze ngizwe zaleyo micimbi.
Phendula uCristina Valencia Salazar
Ukukhethwa kwezindaba zokuhlela zikaJuni